Ibhayisekile yoMoya oThengisayo, uMqeqeshi oQhelekileyo woMnqamlezo, ukuQeqesha ibhayisekile- Bestgym
Ibhayisekile yomoya yoRhwebo
Umqeqeshi woMnqamlezo we-Elliptical
Ibhayisekile ethe tye Magnetic
Ukuhamba kwakhona kweBhayisekile
Umatshini wokuQeqesha uQhele
Ukuzilolonga iibhayisikile zisetyenziselwa umthambo, ukwandisa ukomelela ngokubanzi, ukwehla kobunzima, kunye noqeqesho lweziganeko zomjikelo. Ibhayisekile yokuzivocavoca kudala isetyenziselwa unyango lomzimba ngenxa yempembelelo esezantsi, ekhuselekileyo, kunye nokuzivocavoca okusebenzayo.
Umatshini we-elliptical usebenzisa umgaqo wokuba xa umzimba womntu uhamba kancinci, ngokukhawuleza, okanye ukubaleka, umkhondo we-ankle uyafana ne-ellipse. Ngomatshini othile, i-pedal ihamba kumzila we-elliptical, kwaye umzila we-elliptical owenziwe ngumgaqo we-pedal ukhokela iinyawo zomsebenzisi.Ukusetyenziswa komatshini we-elliptical kwenza isenzo somzimba somatshini we-elliptical sihambelane nenqanaba lomntu. Ngexesha lonke lokuzilolonga, unyawo alushiye ngokupheleleyo unyawo, olunempembelelo enkulu edolweni, kwaye lunokusebenzisa imisipha yamalungu aphezulu nangaphantsi ngaxeshanye. , Kuthathwa njengokuqhekeka kwezixhobo zomthambo ze-aerobic kule minyaka idlulileyo.
Ibhayisekile yebhayisekile esetyenziselwa ubukhulu becala ukubonelela abantu ngesixhobo sokuhamba esikhawulezayo esingu-1653 esingathintelwanga ngumzimba wokumelana nobunzima be-dao, esinomlingani ophantsi wokukhuhlana we-4102, silula kwaye sikhuselekile, kwaye asinawo amandla kunye nongcoliseko lwamandla. Ibandakanya indibano yebhayisekile kunye nendlela yokuqhuba. Xa uqhuba, abantu bafuna kuphela ukukrola inyawo lasekhohlo nelasekunene phambili. Owona mqobo uphambili wamagnetic kwi-flywheel uqhuba isiseko sesiseko semagneti ukuze ujikeleze amandla ozibuthe. Xa iipedali zekhohlo nezasekunene zihamba ngokukhawuleza, zilungelelaniswa nemagnethi yesibini Isondo elingasemva kumbindi lijikeleza ngesantya esiphezulu. Xa i-pedal iyeka, phantsi kwentshukumo yamandla ombane wamagnetic, ibhayisekile inokuhamba ngokuzenzekelayo umgama omde.
Isakhelo seSinyithi isihlalo sokuzivocavoca ngebhayisekile BGR103
China Factory Ixabiso ukomelela ehleli recumbent e ...
Enamavili Ekhaya Uqeqesho Workout Machine Foldin ...
Intengiso eshushu yexabiso elifanelekileyo lentengiso yomzimba ehleli R ...
Amaqabane kulo lonke
2018 CHINA EZEMIDLALO BONISA Shanghai Sports Fair
I-Ningbo Bestgym Fitness Equipment Co ,. Ibekwe elunxwemeni kunye nokuhamba okufanelekileyo kwesixeko-iFenghua Ningbo, egubungela i-30000 yeemitha zesikwere.
UZhangjia Industrial Zone, iShangtian Idolophu, iFenghua, iNingbo, China
Imeyile:Nguyen NguyenNguyen com